Ubuntu akuyiyo inja
Ukwazi ngokubakho kwabantu akukuxeleli oko kuyimfuneko yokuba ngumntu. Ngoko kuthetha ukuthini ukuba ngumntu? Ngaba kukho iqela lokujoyina okanye icawa oya kuyo? Kutheni ukufunwa ngabantu kuyimfuneko?
Iimbutho Zabantu Zineenjongo ezahlukeneyo
I-Humanists yindawo ehlukeneyo yabantu. I-Humanists ingavuma kwaye ayivumelani nezinto ezininzi. Ubuntu buyafumaneka kumacandelo ahlukeneyo eengxoxo eziphambili njengezohlwayo ezinkulu, ukukhupha isisu, i-euthanasia, kunye nerhafu.
Kuyavunywa, unakho amathuba okufumanisa abantu ukuvikela izikhundla ezithile kunabanye. Kodwa akukho mfuneko yokuba bafumene izigqibo ezithile kule miba. Yintoni ebaluleke ngakumbi kubuntwini kunokuba izigqibo umntu azifikelayo ziyimigaqo esetyenziswayo xa ejongene nemiba enzima.
I-Humanists iyavumelana neMigaqo yeFreethought
Abantu bavumelana malunga nemigangatho ye- freethought , i-naturalism, i-empiricism, njl. Ngona kunjalo, apha nakhona sinokufumana ukuhlukahluka. Ngokubanzi ngokubanzi imigaqo yenziwe, isivumelwane esiphezulu sikhona, kwada kwimeko apho kungekho nto iphikisanayo. Xa le migaqo ichazwe ngokukodwa, nangona kunjalo, amathuba okunyuka ukuba abantu abanakho ukuvumelana ngokupheleleyo neenkcukacha zolu qulunqo. Umntu unokuvakalelwa kukuba lihamba kakhulu, alihambeli ngokwaneleyo, lithethwa ngokungalunganga, njl njl.
Ubuntu abuyiyo inja
Ngaba oku kubonisa ukuba ukuthanda abantu akuthethi nto nantoni na?
Andikholelwa njalo. Kubalulekile ukuqonda ukuba ukuziphatha kwabantu akuyona imfundiso. Akukho mfundiso, inkolo, okanye imigaqo yemigaqo umntu kufuneka asayine kuyo ukuze abe "ilungu" leqela. Ukufuna abantu ukuba bavumelane nesethi ethile yeengxelo ukwenzela ukuba bafaneleke njengabantu okanye nokuba ngabantu behlabathi babeza kudala imfundiso baze bacekise ubungqina buntu.
Hayi, ukuziphatha kwabantu ngumgaqo wemigaqo, imbono kunye neengcamango malunga nehlabathi. Abantu bavunyelwe ukungavumelani, kungekhona kuphela kwizigqibo abazenzayo kwimigaqo kodwa nangokwakheka kunye nemilinganiselo yazo. Kungenxa yokuba umntu akenzekanga ukuba athengise iipesenti ezili-100 kuwo onke amabinzana kunye nesitatimende esivela kumaxwebhu omntu asithethi ukuba awanakuba ngabantu okanye abantu. Ukuba oku kwakuyimfuneko, oko bekuza kwenza ukuba abantu bangabi nantoni na kwaye bekungekho nantoni na.
Unokuba Ngumntu Ukuba ...
Oko kuthetha ukuthini ukuba akukho nto enokuyenza ukuze "ube" ngumntu. Ukuba ufunda nayiphi na inkcazo yemigaqo yabantu kwaye ufumanisa ukuba uyavumelana nayo yonke into, ungumntu. Oku kuyinyaniso nokuba xa kufikelele kuloo ngongoma awuvumelani ngokupheleleyo, kodwa unyanzelekile ukuwamkela ukuqhubela phambili okanye ulawulo lwendawo. Mhlawumbi unobomi bomntu, kuxhomekeke kwendlela oya kuyo kwaye uyayilondoloza loo migaqo.
Oku kungathi ngathi "ukuguqulwa ngentsingiselo," apho umntu "aguqulwa" kwinqanaba lokujonga ngokuphinda aphinde aphinde aphinde acinge loo mbono.
Akunangqiqo ukuphakamisa isikhalazo kuba izinto ezinjalo zenzeka, kodwa akunjalo apha. I-Humanism ligama elinikezelwe kwimigaqo nemigono ephuhliswe kwixesha elide lembali yabantu. Ubomi babantu babephila ngaphambi kokuba babe negama kwaye ngaphambi kokuba bani na umntu ocinga ukuba azame ukuyihlanganisa yonke into kwifilosofi ehambelanayo.
Ngenxa yezi migaqo ekhoyo njengengxenye yenkcubeko yabantu nangaphandle kweengcali zefilosofi zabantu, baninzi abantu abaqhubekayo ukuya namhlanje ukuya kubhalisa ngaphandle kokubanika igama. Oku, kubo, yindlela efanelekileyo yokuhamba ngezinto kunye nokuya kubomi - kwaye akukho nto iphosakeleyo ngayo. Ifilosofi ayifuni ukuba negama ukwenzela ukuba ilungile kwaye isebenze.
Nangona kunjalo, lixesha lokuba abantu baqonde ukuba le nfilosofi inalo negama, inayo imbali, kwaye inika ezinye iindlela ezinzulu kwiinkolelo zonqulo, ezingenasimo esithile eziqhele ukulawula inkcubeko namhlanje.
Ndiyathemba ukuba, njengoko abantu beza kuqonda oku, banokucinga ngezi mfundiso zomntu ngokuthe ngqo kunokuba ziqaphele. Kuphela xa abantu bekulungele ukuma ngokuvulelekileyo kwiinjongo zomntu kuya kuba nethuba lokwenza ngcono uluntu.
Ubunzulu-banzi Jonga kwiMigangatho yoLuntu oyiNtloko
Imbali kaPyotr Tchaikovsky